धन्यई Bloggoween! | Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 30, 2007 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
यदि तपाईंले मौका पाउनुभयो भने, आज ब्लगबाट रोक्नुहोस्। मैले हेलोवीनको लागि यस वर्ष लुगा लगाउने निर्णय गरें।
म अचम्ममा छु कि अधिक व्यक्ति आफ्ना ब्लगहरु उत्सव र छुट्टिहरुमा सजाउँदैनन्। मेरो छोरा बुढो भएको लुगा लगाएर (उनले सद्भावनामा आईएचओपी कार्डिगन पनि फेला पारे), र मेरो छोरी उनको जवानीको इमो साइको किलर चरणमा छ।
मेरो लागि, म भोली मेरो भरपर्दो खाकीहरुमा हुनेछु, हुनसक्छ म स्वेटर बनियान लिएर बाहिर जान्छु!
याहूको साथ श्वेतसूची
हर्डले आफ्नै सिद्धान्तमा सफलता प्राप्त गर्‍यो
यो पूर्ण रूपमा तपाईलाई उपयुक्त छ, डग। 🙂 हेलोवीन मुबारक!
म सुधारको बारेमा ओह लाई स्पष्ट टिप्पणी गर्ने छैन .. ईमानदार म गर्दैन
अक्टूबर २१, २०१ at २:०31 बिहान
हम्म, फ्रान्कस्टेन व्यवसाय सूटमा। सोचौं कि मेरी शेलीले के सोच्यो होला ... म केवल धन्यवाद र क्रिसमसको लागि परिवर्तनहरू अनुमान गर्न सक्दछु।
एक राम्रो छुट्टी छ। ती दन्त चिकित्सकहरुलाई पैसामा राख्नुहोस्।
तपाईं राम्रो देखिनुहुन्छ। शुभ हेलोवीन!
कमसेकम अब तपाईको दिमाग छनौट गर्न सजिलो हुनेछ।
उत्तम टिप्पणी अहिले सम्म!
त्यसोभए पोशाक कहाँ छ? हाह।
अक्टूबर २०, २०१ at २:31० अपराह्न
तपाईलाई वास्तवमा कसैले यो काट्नु पर्छ कि यो संक्रमित हुन सक्छ। ग्यांग्रिन हुन सक्छ? शुभ हेलोवीन!
तपाईंले भरखरै आरएसएस पाठकलाई कहिले कतै टाढा राख्नको लागि र वास्तवमै मनपर्ने ब्लगको लागि एक महान केस बनाउनुभएको छ। मैले यसलाई पूर्ण रूपमा छुटाएको छु! आज मैले पाएको राम्रो हाँसो को लागी धन्यवाद! 🙂
मैले हेलोवीनको लागि मेरो ब्लगको पोशाक लगाएको छैन, तथापि, मैले हाम्रो ईमेल मार्केटिंग टोलीको फोटो 'e-टीम' को रूपमा पोष्ट गरेको थिएँ।
त्यो पनि राम्रो छ! काम गर्नको लागि रमाईलो पसल जस्तो देखिन्छ! मलाई यो बताउन को लागी धन्यवाद म नेट को वरिपरि एक मात्र मूर्ख छैन।
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, हामीले हिजो दिउँसो पूरै कल्पना सपना देख्यौं। म अचम्ममा छु कि हामीले यसलाई एकसाथ तान्यौं।
तपाईंले घाँटीका बोल्टहरू बिर्सनुभयो, तर फेरि तपाईंलाई सधैं एक पछाडो पर्दा पर्थ्यो।
तपाईँ सँग छ no विचार कति सत्य छ, स्टर्लिंग!
वाह, छुट्टी बिषयवस्तुहरू वास्तवमै काम गर्दछन्। म यहाँ केहि पाठक भएको छु, तर ब्लागगोविन पोष्टले मलाई टिप्पणी गर्न अन्तमा प्रेरित गर्‍यो, अन्तमा र मेरो ब्लगमा नयाँ वर्षको भावना राख्नु। चेतावनी: कामका लागि सुरक्षित छैन: (हामी वयस्क मनोरन्जनको बजार गर्छौं, तर ब्लग अझै मार्केटिंग फोकस हो, अश्लील होइन) मुबारक Bloggoween, स्पूकी कस्टम वयस्क स्टोर सफल.